ပင်မစာမျက်နှာ 1 > သတင်း 2
MysteryAnime ဒီအပ်ဒိတ်သည်များစွာသောလူနှင့်မသက်ဆိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိကုန်ပစ္စည်းချိန်ညှိချက်များ / ရွေးချယ်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြေရှင်းလိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ပစ္စည်းများကိုပိုမိုမြန်ဆန်စေရန်နှင့်ဖောက်သည်များအတွက်ပိုမိုလွယ်ကူသောအတွေ့အကြုံများကိုပြုလုပ်ရန်လုပ်ဆောင်နေသည်။ လာမည့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ငွေပေးချေမှုစာမျက်နှာကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်နေစဉ်တွင်သူတို့သည် Paypal နှင့် Amazon Pay ကိုအသုံးပြုနေသည့်တိုင်အောင် debit သို့မဟုတ် credit card ဖြင့်မစစ်ဆေးနိုင်တော့ပါ။ ယခုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နေသည်များအပြင်လက်ရှိအမှားများကိုပြုပြင်နေစဉ်အထက်ပါနည်းလမ်းနှစ်ခုသည်တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာများဖြစ်သည်။
Update ကို 5/17/2020 ခြေရာကောက်
Posted by ကို Anh Khoa on မေလ 17, 2020
ဟယ်လို! ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အထောက်အကူပြုအဖွဲ့သည်အီးမေးလ်၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့်အခြားလူမှုရေးပလက်ဖောင်းများမှတစ်ဆင့်အမှာစာများမေးမြန်းခြင်းကိုခံနေရသည်။ မကြာသေးမီကဖြစ်ပွားခဲ့သောဖြစ်ရပ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သောဖောက်သည်အထောက်အပံ့ကိုယ်စားလှယ်များအပေါ်အလွန်နိမ့်ကျသောကြောင့်၎င်းသည်မကြာသေးမီကဖောက်သည်များအားလုံးကိုတုန့်ပြန်ရန်နှင့်အာမခံရန်ခက်ခဲစေသည်။ ပြtheနာများအတွက်တောင်းပန်လိုပါသည်။ developer တစ်ယောက်ပြင်ဆင်ရန်အချိန်လိုအပ်သောခြေရာခံချက်နှင့် ပါတ်သက်၍ ပြseenနာကိုကျွန်တော်တို့မကြာမီကမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ၎င်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏စိတ်ရှည်သည်းခံမှုအားလုံးကိုတန်ဖိုးထားပြီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအချိန်တိုအတွင်းနှောင့်နှေးနေနိုင်သော်လည်းသင်၏အမှာစာရောက်ရှိလာလိမ့်မည်ဟုသင့်အားအာမခံလိုပါသည်။ အကြောင်းပြချက်တခုခုရှိရင် ...
Posted by ကို Anh Khoa on မေလ 1, 2020
ပစ္စည်းတစ်ခု ၀ ယ်ရုံဖြင့်လူတိုင်းကိုသူတို့ရွေးချယ်ထားသောလှူဒါန်းမှုသို့လှူဒါန်းရန်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြီးပြီဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အလွန် ၀ မ်းသာပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်းမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကုန်ပစ္စည်းကိုကြည့်ရှုခြင်းသို့မဟုတ်လှည်းသို့ထွက်ခွာခြင်းသို့ရောက်သည့်အခါ add to cart ခလုတ်အထက်ရှိအပိုင်းတစ်ခုသည်သင့်အားပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်သင်ရွေးချယ်လိုသောမည်သည့်ကုသိုလ်ဖြစ်ပရိုဂရမ်ကိုရွေးချယ်သည်ကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ သင်ထောက်ပံ့လိုသောပရဟိတလုပ်ငန်းကိုပြောင်းလဲလိုပါက“ Update Cause” ခလုတ်ကို နှိပ်၍ လူကြိုက်များသောအကြောင်းတရားများအတွက်ရွေးစရာ ၅-၇ ခုကိုရနိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။
COVID-19 တုံ့ပြန်မှု 4/29/20
Posted by ကို G-translate ပူးပေါင်းသူ on ဧပြီလ 29, 2020
MysteryAnime ရဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကာလသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ၂ ပတ်မှ ၄ ပတ်အကြာဖြစ်ပြီး၊ မ သင်၏အမှာစာတင်ပို့ချိန်သို့မဟုတ်ပေးပို့မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဒါ့ကြောင့်သင်၏မှာကြားမှုအတွက်ပြproblemsနာများမဖြစ်ပေါ်စေပါ။
MysteryAnime Update ကို 4/5/2020
Posted by ကို Jarrod Cavanaugh on ဧပြီလ 5, 2020
ဟယ်လို! ဤဆောင်းပါးသည်ဖောက်သည်များအသုံးပြုသောဘာသာစကားအများစုသို့ပြန်သွားပါမည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏မိခင်ဘာသာစကားကိုရှာဖွေပါ။ အင်္ဂလိပ်လိုသာလျှင်ဤစာမူကိုလျစ်လျူရှုပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ~ MysteryAnime Team ကျွန်ုပ်တို့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များနှင့် visitors ည့်သည်များသည်သူတို့ရှာဖွေနေတဲ့အရာများကိုအလွယ်တကူရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်အောင်သေချာစေချင်ပါသည်။ မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များအနေဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများရှာဖွေခြင်းနှင့်စတိုးဆိုင်ကိုယ်နှိုက်ကိုလှည့်လည်ရှာဖွေခြင်းတို့တွင်ပြissuesနာတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်တင်ပို့ကာနေရာတိုင်းအခမဲ့အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရှိကြောင်းကမ္ဘာတဝှမ်းရှိအင်္ဂလိပ်စကားမပြောသောနိုင်ငံများနှင့်သေချာစေရန်နှင့်အတည်ပြုလိုသည်။